‘एकै दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले ठूलो भूल गरे’ – Khula kura
सभामुख पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था विपरीत उभिएको सरकारको आ’रो’प छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एउटा गुटको सल्लाहमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना भइरहेको छ ।
सभामुख सापकोटा मंगलबारको बैठकमा उपस्थित नभएपछि सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गरेको बताए ।
संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेर संविधान माथिको जालसाजी गरेको बताए ।
सभामुखको भूमिका खेल्नु भएको भए जानुहुन्थ्यो होला ? दलीय नेताको भूमिका खेल्दा जानुभएन भन्ने अर्थ लाग्यो । सभामुख भनेको तथष्ट रहेर संवैधानिक बैठकमा जाने हो । उहाँ प्रचण्डजीको प्रभावमा पर्नुभयो भन्ने देखियो । यो मेरो अर्थ नभए पनि उहाँको भूमिकाले यो ठाउँ दियो,’ ढुंगानाको भनाइ छ ।
नेपालमा उनले संविधानको आचरणभित्र कोही पनि नबसेको बताए । ‘यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । धमाधम गोजीबाट अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । जतिबेला पनि अध्यादेशले जलाउने कुरा भएन ।
यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुख सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुनुले राजनीतिक अर्थ दिएको बताए । उनले भने, ‘सभामुखकै कुनै कारणले पनि अनुपस्थित हुन सक्नुहुन्छ । तर अकसर यसरी सभामुख नजाँदा परिस्थितिजन्यरुपमा हेर्नुपर्छ ।
उहाँ नगएकोमा राजनीतिक कारणले नजानुभएको भनेर अर्थ लाउन सकिन्छ । उहाँले राजनीतिक दबाब गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिने समूहको प्रभावमा परेर जानु भएन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । ‘तर सभामुखले के भन्नुहुन्छ भन्ने हो । उहाँले दलीय नेताको भूमिका खेल्नुभयो ।
यो अध्यादेश ल्याउन र सभामुख नजानु दुवै गल्ती छ । प्रचण्डजीले सभामुखलाई प्रभावमा पार्नु गल्ती छ । कसले संविधान मानेको छ र ? अनि कसले यो गरौँ भनेर भनेको छ र ?’
तर पूर्वसभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले भने साभमुख सापकोटा बैठकमा नभएको विषयमा बचाउ गरिन् । उनले भनिन् ‘पर्याप्त परामर्शबिना संवैधानिक बैठकमा सभामुख नगएर राम्रो गर्नु भयो । किन भने सरकारको आदेश संसदले मान्ने होइन नि ।
त्यहाँ छलफल बहस हुन्छ, नीति नियम प्रक्रियाको कुरा हुन्छ । सभामुखलाई जति सूसुचित गरेर बोलाउनुपर्ने हो त्यो कुरा भएको छैन भने सभामुखले ठीक गर्नुभयो ।’
सदनको इज्जत, मान प्रतिष्ठा र गरिमाको लागि सभामुख बैठकमा नगएको उनको भनाइ छ । ‘सभामुखलाई गैरजिम्मेवार ढंगले बोलाइएका छ भने सदनको इज्जत, मान प्रतिष्ठा र गरिमाको लागि सभामुख जानुहुँदैन । सरकारले आफ्नो मातहतको कुनै कमिटी जस्तो गरी बोलाउन पाइँदैन नि ? उहाँ सदनको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि लड्नु भएको हो ।
सदनको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि लड्नुपर्ने पनि छ । अस्ती सदन स्थगित हुँदा पनि सभामुखलाई जानकारी दिइएको थिएन । उहाँहरुले सदनमा लगातार हस्तक्षेप गरिराख्नुभएको छ । यसलाई घोर निरंकुशता भनिन्छ ।’
सभामुख सापकोटाले संघीय संसदको गरिमा कायम राख्दै संवैधानिक परिषदको मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैब सचेत रहेको सचिवालयमार्फत जनाएका छन् ।
‘नेपालको संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई यहाँ नेर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सभामुख सापकोटाको सचिवालयको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले लिने निर्णयले दुरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात गर्नु भएको छ।’
रातो पाटी बाट सावर
देउवा; जनताले किन नबु’झेक ओली र राजाको भेट भइरहेको छ ,